75 tahriibayaal ah ayaa ku Dhintay Badda Mediterranean-ka. | Hargeysa World~Herald
75 tahriibayaal ah ayaa ku Dhintay Badda Mediterranean-ka.
Uncategorized75 tahriibayaal ah ayaa ku Dhintay Badda Mediterranean-ka.
Hay’adda socdaalka Qaramada Midoobay ee IOM ayaa sheegtay in 75 tahriibayaal ah ay ku dhinteen badda Mediterranean-ka ee waqooyiga Liibiya horraantii toddobaadkan xilli ay doonayeen inay gaadhaan Talyaaniga.
Ururka caalamiga ah ee socdaalka ayaa ku sheegay masiibadii ugu dambaysay bartooda twitter-ka Sabtidii, iyagoo xogtan ku sheegay in 15 qof oo dadkaas la socday ay soo badbaadiyeen kalluumaysato, isla markaana la keenay dekedda Zuwara ee waqooyi-galbeed ee Liibiya.